FAL NAXDIN LEH: Qisada Nin lagu dilay magaalada Muqdisho, kadibna la gubay heybsooc dartiis - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/FAL NAXDIN LEH: Qisada Nin lagu dilay magaalada Muqdisho, kadibna la gubay heybsooc dartiis
FAL NAXDIN LEH: Qisada Nin lagu dilay magaalada Muqdisho, kadibna la gubay heybsooc dartiis
Fal si weyn looga naxay ayaa ka dhacay xaafadda Towfiiq ee degmada Yaaqshiid, Gobolka Banaadir markii weerar lagu qaaday nin caan ka ah xaafadda oo la dilay iyadoo loo adeegsaday Baangaro iyo Mindiyo , kadibna la gubay.
Arrintan ayaa ka dhalatay laba qoys oo deris ahaa oo muran ku dhex maray markii wiil ka dhashay Qoys kasoo jeeda Beesha Jareer uu guursaday gabar deris ah markii ay is fahmeen, isla markaaa uu dhex maray rabitaan, taasoo keentay inuu muran ka dhasho.
Guurka waxaa si weyn uga soo horjeesatay hooyada dhashay gabadha, basle dadaalo uu sameeyay wiilka gabadha rabay ayaa ugu dambeyn wuxuu ku qanciyay gabadha adeeradeed in lagu daro gabadha maadaama ay isjecel yihiin, iyadoo xarunta maxkamadda degmada lagu mehriyey.
Hooyada dhashay gabadha oo si weyn uga caroortay arrintan ayaa ku dooday in Beesha wiilka uu ka soo jeeda aanaey gabadheeda guursan karin, waxayna abuurtay fowdo keentay in maxkamad la isla tago oo looga digo inay qoyskaasi faraha ka qaado.
Hooyadii oo wadata gabdho koox ah iyo dad kale ayaa ku dhaqaaqady fal argagax leh, kadib markii goobtiisa ganacsiga ay ugu tageen Axmed Muqtaar Saalax oo ku magac dheer Axmed Dowlo oo wiilka adeer u ahaa, kadibna halkaasi ay ku dileen, iyaga oo tooreeyo iyo Maqar u adeegsaday dilkiisa, kadibna Dab & Bansiin qabadsiiyey Marxuumka.
Falkan aan hore loo arag ayaa si weyn looga hadal hayaa xaafadda uu ka dhacay iyo guud ahaan Baraha bulshada ku xiriirto, wuxuuna noqday lama filaan iyo tallaabo laga argagaxay.
Dil Muqdisho Yaaqshiid
Golaha Wasiirada oo ansixiyey Istiraatiijiyad Amni & Somalia oo ku biirtay Axdi Q/Midoobay u yaalla
Wasaaradda Caafimaadka oo war ka soo saartay Tallaalka Covid19